खाद्य सम्प्रभुता ग्यारेण्टीको लागि आइतबार नेपाल बन्द — OnlineDabali
खाद्य सम्प्रभुता ग्यारेण्टीको लागि आइतबार नेपाल बन्द
माइला लामा, केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौँ जिल्ला इन्चार्ज, नेकपा (माओवादी)
Posted on November 12, 2016 by अनलाइन डबली
तपाईँहरुले फेरि नेपाल बन्दको आयोजना गर्नुभयो, किन ?
राज्यले संविधानमा सम्प्रभुता लेख्ने तर व्यवहारमा उल्टो गर्दै आएको छ । नागरिकको पहिलो र आधारभूत अधिकार हो यो । यसको ग्यारेण्टीको लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थियौँ । भेटमा जिम्मेवारपूर्ण अभिब्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्रीले व्यवहारमा गैरजिम्मेवार बनेपछि नेपाल बन्द गर्नु परेको हो ।
नेपाल बन्द गरेपछि राज्यले तपाईँहरुको माग पूरा गर्छ त ?
राज्य आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ । नागरिकको बाच्ने अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने हो तर राज्य गैरजिम्मेवार छ । हामीले नागरिकको तर्फबाट राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन उद्देश्यले बन्दको आयोजना गरेका हौँ । आफ्नो अधिकारको लागि नागरिकको शान्तिपूर्ण संघर्षको उच्च रुप बन्द हो । हामीले त्यही शान्तिपूर्ण आन्दोलनको उच्च रुप अपनाएका हौँ ।
यदि राज्य अझ पनि जिम्मेवार नभए नागरिकले नेपाल बन्दभन्दा ठूलो संघर्षको रुप अपनाउन बाध्य हुनेछन् ।
तपाईँका एजेण्डा ठिकै भएपनि बन्दको विकल्पमा कुनै अर्को संघर्षका कार्यक्रम गर्न जनताको मागलाई बेवास्ता गर्नुभयो नि ?
जनताको गुनासोसँग हामी पनि सहमत छौँ । यो बन्दको आयोजना गर्नुभन्दा हामीले पार्टीमा बहस–छलफल गरेका थियौँ । गैरजिम्मेवार राज्यलाई यो भन्दा अर्को संघर्षका कार्यक्रममा नछुने भएका कारण नेपाल बन्द गर्न बाध्य भएका हौँ । यो कुनै ब्यक्ति वा समूहको विषय नभएर आम नागरिककै अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो ।
अर्को कुरा नागरिकले एक दिनको दुःखले अधिकार पाए भने त सधैको लागि हुन्छ । त्यसैले राज्यलाई दवाव सिर्जना गर्न आइतबारको नेपाल बन्द सफल पार्नुपर्छ ।
खाद्य सम्प्रभुता त एनजिओ र आइएनजिओहरुले पहिले नै उठाएको विषय हो । तपाईँहरुले प्रचारको लागि यो विषय उठाउनु भएको भन्ने आरोप छ के भन्नुहुन्छ ?
त्यो गलत हो । एनजिओ र आइएनजिओले त नागरिकका नाममा डलर ल्याउने र नयाँ धनाढ्य बन्ने उद्देश्यले खाद्य सम्प्रभुताकाे विषय उठाइरहेका छन् । यो राज्य वा राजनीतिक पार्टीहरुले उठाए मात्र समाधान हुने विषय हो । त्यसैले एनजिओ र आइएनजिओहरु पहिलो उठाए पनि अहिलेससम्म समस्या उस्तै छ । नागरिकलाई केही राहत भएको छैन ।
प्रचारको लागि यो विषय उठाए भन्दा हामीमाथि अन्यय हुन्छ । सरकारले खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेण्टी गरेको भए उसैको प्रचार हुन्थ्यो । अथवा सरकारमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरुले उठाएपनि त हुन्थ्यो नि । उहाँहरुकै उहाँहरुकै लोकप्रियता बढ्ने थियो । राज्य र राज्य संचालन गरिरहेका राजनीतिक पार्टीहरुल अलपत्र छाडेर नागरिकलाई हैरानी पारेका कारण हामीले उठाउन बाध्य भएका हौँ ।
बन्दबारे केही भन्नु छ ?
हामीले नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषयमा नेपाल बन्द गर्न लागेका छौँ । एक दिनको दुःखभन्दा अधिकार ठूलो कुरा हो । नागरिकको बाच्न पाउने आधारभूत अधिकार प्राप्तिको लागि विहान पाँच बजेदेखि साँझ पाँचसम्म नेपाल बन्दसम्म आयोजना गरिएको नेपाल बन्द सफल पार्न अाम नागरिकलाई सहयोग गर्न अनुराेध गर्दछाैँ ।
जे फल्छ त्यही फलाउनु हुँदैन,जे बजारमा बिक्री हुन्छ त्याे मात्र फलाउनु पर्छ
प्रधानमन्त्रीले भारतसँग मगन्ते साेच राख्नु हुँदैन